Gobolka Banaadir oo ku dhowaaqay go’aan uga sii darayo xiisadda kala dhexeyso ROOBLE | dalkaan.com-Wararka ugu danbeeyay ee soomaaliya
Home Warkii Gobolka Banaadir oo ku dhowaaqay go’aan uga sii darayo xiisadda kala dhexeyso...
Muqdisho (Dalkaan.com) – Maamulka gobolka Banaadir oo haatan xiisad ay kala dhexeyso xukuumadda uu hoggaamiyo ra’iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble, gaar ahaan wasaaradda amniga ayaa ku dhowaaqay go’aan kale oo uga sii dari karo xiisadda.
Barcelona, ​​Real Madrid iyo Chelsea oo xiisaynaya saxiixa Riyad Mahrez.
Xiddiga garabka uga ciyaara kooxda Man City ee Riyad Mahrez ayaa lagu soo waramayaa in uu xiiso ka helayo kooxo badan oo Yurub ah ka hor...
Mariano Diaz ayaa ku wargeliyay Real Madrid rabitaankiisa inuu ka tago.
Putin oo kasoo horjeestay qorshaha wadamada G20, kuna dhowaaqay..
Sawirro: Xasan oo si weyn loogu soo dhoweeyey Baydhaba, shaaciyeyna qorshihiisa
Farmaajo sanad mudo korarsi ah. Doorashadii oo aan wali qabsoomin, isaga...
Maxkamadda ciidamada oo dil iyo xabsi ku xukuntay qaar ka mid...